iPhone မှကွန်ပျူတာသို့ဓါတ်ပုံများကိုဘယ်လိုလွှဲပြောင်းမလဲ အိုင်ဖုန်းသတင်း
Ignacio Sala | | iPhone ကို, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
iPhone7ကိုဖြန့်ချိရာတွင် 16 GB နှင့်အတူကုမ္ပဏီကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောပစ္စည်းများ၏အဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီမော်ဒယ်ကို ၀ ယ်တဲ့သုံးစွဲသူတွေအတွက်စီမံစရာနေရာမရှိသလောက်သိုလှောင်တဲ့နေရာ။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် Apple မှပေးသောမော်ဒယ်များအားလုံးသည် iPhone အကွာအဝေးနှင့် iPad အကွာအဝေးနှစ်ခုစလုံးတွင်သိုလှောင်မှုပမာဏ 32 GB ရှိသည်။ အာကာသထက်ဝက်ခန့်ထက် ပိုမို၍ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည် operating system ကိုသိမ်းပိုက်ကြောင်းကျနော်တို့အနည်းငယ်သာ 11 ကျော် GB ကိုကျန်ကြွင်းခဲ့ရသည်။
Application ကို install လုပ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုရိုက်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ device ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာနေရာလွတ်ကိုလျှော့ချပြီးကွန်ပျူတာသို့ PC သို့မဟုတ် Mac စက်ကိုထုတ်ယူဖို့ဖိအားပေးရမယ်။ ဓါတ်ပုံများကိုအရန်ကူးပါ ကျွန်ုပ်တို့ယခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သောဗီဒီယိုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ယူရန်နည်းလမ်းများသည်လည်ပတ်ရေးစနစ်နှစ်ခုလုံးတွင်မတူညီသည်ကိုသတိရရမည်၊
1 iPhone မှ Mac သို့ဓါတ်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းရန်နည်းလမ်းများ
1.3 ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်ရှိဓါတ်ပုံများအက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းသောဓါတ်ပုံများသည်မည်သည့်နေရာတွင်သိုလှောင်ထားသနည်း။
1.5 iTunes က
2 iPhone Data Transfer - EaseUS MobiMover
3 iPhone မှ Windows သို့ဓါတ်ပုံများမည်သို့ပြောင်းနည်း
3.1 iTunes က
4 iPhone မှ Cloud သို့ဓါတ်ပုံများမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
4.1 ဓါတ်ပုံများ google
iPhone မှ Mac သို့ဓါတ်ပုံများကိုလွှဲပြောင်းရန်နည်းလမ်းများ
iCareFone သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအပြည့်စုံဆုံးဆော့ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ယူပါအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုရှုပ်ထွေးလွန်း။ အလိုအလျောက်မသိသောနည်းလမ်းများဖြင့် MacOS နှစ်ခုလုံးကကျွန်ုပ်တို့အားမိခင်ဘာသာစကားနှင့် Windows အတွက်ပေးထားသောရွေးချယ်စရာများဖြင့်ရှုပ်ထွေးစေလိုခြင်းမရှိပါက။
Tenorshare မှကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအဖြေ iCareFone အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို iOS စက်မှကွန်ပျူတာသို့လျင်မြန်စွာလွှဲပြောင်းပေးသည်ဤအကြောင်းအရာအမျိုးအစားကို iTunes မှကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသို့အပြန်အလှန်ပို့ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်၊ သို့သော်ထိုဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးခဲ့သောပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကိုအာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ဓာတ်ပုံများကို Tenorshare iCareFone ပရိုဂရမ်နှင့်အတူဖြတ်လိုက်ပါ ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်အောက်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။
ပထမ ဦး စွာလျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ အကယ်၍ စက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကကွန်ပျူတာကို၎င်းမှအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်စေရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးချင်ပါသလား၊ ကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းပါ၊ ယုံကြည်မှုကိုနှိပ်ပါ။ အခြားမဟုတ်ပါက၎င်းစက်သည်ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ငါတို့သုံးမယ့် application ။
ထို့နောက် option ကိုနှိပ်ပါ တစ်ကြိမ် နှိပ်၍ ဓာတ်ပုံများကို PC သို့တင်ပို့ပါ။ ယခုအချိန်တွင် application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch တွင်သိမ်းထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများအားလုံးကိုမည်သည့်ပုံရိပ်အားကျွန်ုပ်တို့တင်ပို့စရာမလိုဘဲတင်ပို့လိမ့်မည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်မည်သည့်နေရာတွင်အလိုအလျောက်ပွင့်လာလိမ့်မည် ပုံရိပ်တွေအားလုံးရှိနေတဲ့ဖိုလ်ဒါကိုပြလိမ့်မယ် ငါတို့စက်ကနေထုတ်ယူလိုက်တယ် နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလုပ်ဆောင်ရမည်။ ၎င်းတို့ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ၊ အရန်ကူးရန်အတွက်ပြင်ပ hard drive သို့ကူးပါ။
iCareFone သည်ယခင်နည်းလမ်းကိုတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် သင့် iPhone မှသင့်ကွန်ပျူတာသို့ဓာတ်ပုံအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကူးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ application ရဲ့အောက်ခြေကပုံတစ်ပုံကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ဒုတိယ icon ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံများကိုရွေးပြီးညာဘက်ကော်လံတွင်စက်ပေါ်တွင်သိမ်းထားသောဓါတ်ပုံအားလုံးကိုပြသလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ရမည် တစ်ခုချင်းစီကိုရွေးပါiPhone မှထုတ်ယူလိုသောပုံနှင့် button ကိုနှိပ်ပါ တင်ပို့ရန်။ နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ် အရာ directory ကိုအတွက်ကိုရွေးပါ ငါတို့ iPhone ကနေထုတ်တော့မယ့်ပုံတွေကိုသိမ်းချင်တယ်။
Tenorshare iCareFone နှစ်ခုလုံးအတွက်ရနိုင်သည် MacOS အတွက် Windows ။
အက်ပလီကေးရှင်းကဓာတ်ပုံအက်ပလီကေးရှင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသည် ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများမှအကြောင်းအရာကိုထုတ်ယူပါ သုံးစွဲသူများစွာကရယ်စရာကောင်းသည့်နည်းဖြင့်၎င်းကိုကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ရွှေ့ခြင်း (သို့) ဖျက်ခြင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးချက်များအရရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရခွင့်မပြုပါ။ ဒီပြproblemနာကိုနောက်မှနည်းနည်းဖြေရှင်းမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch ကို Mac နှင့်ချိတ်ဆက်တိုင်းမိခင်ဘာသာစကားဖြင့် Photos application သည်အလိုအလျောက်ပွင့်လာပြီးနောက်ဆုံးဗွီဒီယိုများနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ဓာတ်ပုံများကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သီးခြားစီသိုလှောင်လိုသည့်သိုမဟုတ် application ထဲတွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းထားသောပုံများကိုထုတ်ယူရန်၎င်းတို့အားရွေးချယ်ပြီးသော့ကိုနှိပ်ပါ သွင်းကုန်ရွေးချယ်ခြင်း (1), လျှောက်လွှာ၏အထက်ညာဘက်အစိတ်အပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သို့ပို့ပြီးသောအခါ၎င်းတို့အားဖယ်ရှားပစ်စေလိုပါကလေးထောင့်ကွက်ကိုစစ်ဆေးရမည် တင်သွင်းပြီးသည့်နောက်ပစ္စည်းများ (2).
ကျွန်ုပ်တို့သည်တင်သွင်းမှုအသစ်ကိုရွေးနိုင်သည် (3)ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ Photos application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်အချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်၏စက်တွင်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံအားလုံးကို download လုပ်ရန်အလိုအလျောက်တာဝန်ယူသည်။ ၎င်းကို Photos application နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိလျှင် application သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ရှိဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုတင်သွင်းလိမ့်မည်။
ဒီတာဝန်လွယ်ကူချောမွေ့ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် Albums အပိုင်း (၄)၊ ညာဘက်ရှိကော်လံတွင်တည်ရှိပြီးသင် application မှဖန်တီးခဲ့သောမတူကွဲပြားသောအယ်လ်ဘမ်များ (People, Places, Selfies ... ) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးမှုတွင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်နေရာကိုသွားနိုင်သည်။ စက်ကိရိယာ။
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါကရုပ်ပုံများအားလုံးသည်နောက်ဆုံးတင်သွင်းမှုခေါင်းစဉ်အောက်ရှိအယ်လ်ဘမ်များကဏ္inတွင်ပြလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာကိုရပ်ပြီး၎င်းကိုအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Application, လူများ၊ နေရာများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ Screenshots များမှပုံများကိုစတင်ခွဲခြားလိမ့်မည်။ (5).
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်ရှိဓါတ်ပုံများအက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းသောဓါတ်ပုံများသည်မည်သည့်နေရာတွင်သိုလှောင်ထားသနည်း။
ကောင်းပြီ၊ ယခုငါတို့ Mac တွင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Photos application အတွင်းရှိပြီ သူတို့ဘယ်မှာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှထုတ်ယူထားသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Finder သို့ သွား၍ ပုံများကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းညာဘက်အပိုင်းတွင်မထားပါနှင့်။ Photo Library .photolibrary ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးရွေးပါ အထုပ်အကြောင်းအရာပြပါ။ ပြသမည့်ပြတင်းပေါက်အသစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများကိုနှစ်နှင့်လများအလိုက်မာစတာလမ်းညွှန်အတွင်းတွင်တွေ့လိမ့်မည်။
Image Capture အပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းမှပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ယူရန်ခွင့်ပြုရုံသာမက Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကင်မရာများ၊ ဗွီဒီယိုကင်မရာများသို့မဟုတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်ကိရိယာများမှဓာတ်ပုံများကိုလည်းရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ MacOS Dock မှာဒီ app ပျောက်နေတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Launchpad> အခြားသူများမှတစ်ဆင့်၎င်းကိုရယူသုံးစွဲရမည်။
Application ကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့ Mac ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ရမယ် ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာကိုအသိအမှတ်ပြုပါ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းဆည်းထားပြီးအဲဒါတွေကိုထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားရွေးချယ်ပြီးဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့၎င်းတို့ကိုကူးယူလိုသည့်ဖိုင်တွဲသို့ဆွဲယူရုံသာဖြစ်သည်။
လည်း ကျနော်တို့ destination သည် directory ကို select လုပ်ပြီး Import all key ကိုနှိပ်ပါအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုထုတ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများမိတ္တူကူးပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ရှိအမှိုက်ပုံးထဲသို့တိုက်ရိုက်ဆွဲယူသွားနိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ iTunes ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှပုံများကိုထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်နားလည်ရန်ခက်ခဲ။ တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်နည်းလမ်းများအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac ကိုအသုံးမပြုပါက iTunes ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတစ်ခုလုံး၏မိတ္တူကူးသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ပုံများကိုအခြား application ဖြင့်ထုတ်ယူခြင်း၊ ၎င်းသည်အထူးပြုလုပ်ရန် application တစ်ခုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
iToto မှညွှန်ပြသည့်အတိုင်း iFoto သို့မဟုတ် Aperture ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည် အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုလုံးကို Apple ကထောက်ပံ့တော့မည်မဟုတ်ပါ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဤဆောင်းပါး၌ရရှိနိုင်ရွေးချယ်စရာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားကြသည်မဟုတ်။ iTunes သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစက်ထဲသို့ကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းလိုသည့်ကိရိယာများနှင့်စက်ပစ္စည်းအားထပ်တူပြုမည့်တည်နေရာရှိသောဖိုင်တွဲများကိုသာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ယခင်ဖြစ်ရပ်များတွင် iMazing အကြောင်းပြောခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တုိ့သည်ပုံများကိုဆွဲတင်ရုံသာမက၊စာအုပ်များ၊ တေးသီချင်းများ၊ မှတ်စုများကိုလည်းထည့်သွင်းနိုင်သည် သူမ၏နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများထွက်တင်ဆောင်လာသောအပြင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပုံများ (သို့) ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကို Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ application ကိုတပ်ဆင်ပြီးညာဘက်ကော်လံရှိကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုသွားရမည်။
ပြီးလျှင်ကင်မရာကိုအလိုအလျောက်နှိပ်ပါ ငါတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အယ်လ်ဘမ်အမျိုးမျိုးကစတင်ပြသလာတယ်။ ကျွန်တော်ပုံတွေကို extract လုပ်ချင်တဲ့ album ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ အဲဒါကို select လုပ်ပြီး application ရဲ့ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Export ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံများသိုလှောင်လိုသောနေရာတွင် Directory ကိုရွေးပြီး Choose ကိုနှိပ်ပါ။ ရွေးချယ်ထားသောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်စတင်ပါလိမ့်မည်။
ရွေးချယ်ထားသောဓါတ်ပုံများကိုတင်ပို့ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညာဘက်အောက်ထောင့်သို့ သွား၍ Delete ကိုနှိပ်ပါ iPhone မှကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သို့ကူးယူခဲ့သောပုံများကိုဖျက်ပါ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်အာကာသကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ iMazing ကိုယူရို ၃၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည် ၎င်းသည် PC နှင့် Mac နှစ်ခုလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ trial version သည် session တစ်ခုစီတွင်တင်သွင်းရန်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုအရေအတွက်ကို ၅၀ အထိကန့်သတ်ထားသဖြင့်သင်၏ရုပ်ရှင်ကို trial version နှင့်အတူ session အများအပြားတွင် download ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤလျှောက်လွှာ အမြဲ jailbreak အသုံးပြုသူများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်.ipa ဖိုင်များကို install လုပ်ရန်နှင့်ဖျက်ရန်သာမက၊ အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သော iFunbox နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ iMazing ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်ရုပ်ပုံများအားလုံးကိုမြန်ဆန်စွာနှင့်အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကင်မရာကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ပုံအားလုံးကိုရွေးရမယ်။ ပြီးနောက်ထိပ် menu ကိုသွားပြီး Copy to Mac ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ directory ကိုရွေးရမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းပြီး Choose ကိုနှိပ်ပါ။ ၄ င်းတို့ကိုပယ်ဖျက်ရန် fn + delete ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိုက်သောပုံရိပ်များ၏ဖျက်မှုကိုအတည်ပြုရန်နှင့် Mac ပေါ်တွင်လုံခြုံစွာထားရှိရန်လိုအပ်သည်။
iFunbox ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ။
iPhone Data Transfer - EaseUS MobiMover
အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ iTunes မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှဓါတ်ပုံများကိုကွန်ပျူတာသို့ဖြစ်စေ၊ Mac ဖြစ်စေဖြစ်စေကွန်ပျူတာသို့လွှဲပြောင်းပေးသည့်နောက် application တစ်ခုမှာ iPhone Data Transfer ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch တွင်သိမ်းထားသောပုံအားလုံးကိုကူးပါ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းအတွက် PC သို့မဟုတ် Mac ရန်။
iPhone Data Transfer ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှပုံများထုတ်ယူပါထို့အပြင်၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်းအပြင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် Mac မှကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch သို့အကြောင်းအရာများကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone မှဓါတ်ပုံများကို PC (သို့) Mac သို့လွှဲပြောင်းရန်နှင့်မိတ္တူကူးယူရန်အတွက်၎င်းရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးရမည် Mac မှစက်ပစ္စည်း။ ထို့နောက် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး data ရင်းမြစ်အဖြစ်ရွေးနိုင်သည်။
ပြီးရင်ပထမဆုံး option ကိုရွေးပါ။ ပုံရိပ် နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ရွေးရမယ် destination ဖိုင်တွဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone မှထုတ်ယူလိုသည့်ပုံများကူးယူလိုသည့်နေရာ။ လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွှဲပြောင်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအရေအတွက်၊ သူတို့သိမ်းပိုက်နိုင်သည့်အရွယ်အစား (အထူးသဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောပုံ) ပေါ်မူတည်ပြီး၊ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအချိန်ယူလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ငါတို့ပုံရိပ်တွေကိုကွန်ပျူတာထဲသို့အချိန်အကြာကြီးမရွှေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူယူလို့ရတယ်။
iPhone ကိုဒေတာများကိုလွှဲပြောင်း ထိုသို့ Windows အတွက်သာမက Mac အတွက်ပါအသုံးပြုနိုင်သည်.
iPhone မှ Windows သို့ဓါတ်ပုံများမည်သို့ပြောင်းနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုထုတ်ယူရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows ဖိုင်စနစ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပါကအရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ / သို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ SD ကဒ်တွင်သိမ်းထားပြီးသောဖိုင်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ၊
ကံမကောင်းစွာပဲ iTunes အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်မည်သည့် application များတပ်ဆင်ထားသည်ကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဗီဒီယိုများ၊ တေးဂီတများ၊ စာအုပ်များနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို Windows version မှာပုံရိပ်တွေကိုထုတ်ယူခွင့်မပေးပါဘူးMac version လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာတခြားတရားမဝင်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုခိုင်းတယ်။ ရုပ်ပုံများကိုအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အတွက်စက်ကိုတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးဖိုင်များကူးယူခြင်းနှင့်ကူးထည့်ခြင်းသည်ထိုနေ့၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်ဆိုပါက iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှပုံရိပ်များကိုထုတ်ယူရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ Windows file explorer မှတစ်ဆင့်။ ဤနည်းဖြင့်ပုံများရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သော iTunes ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည် အောက်ပါ link ကိုတဆင့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကို Windows PC နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာထဲတွင်ပေါ်လာမည့် drive သို့သွားသည်။ နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောဖိုလ်ဒါများနှင့်၎င်းတို့အကြောင်းအရာများဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားမဖော်ပြသောအမည်များဖြင့်သွားလာရန်သာလိုအပ်သည်။ ပုံတွေအားလုံးကိုရွေးပြီးဖြတ်လိုက်ပြီးငါတို့သိမ်းချင်တဲ့ PC မှာရှိတဲ့ directory ထဲမှာ paste လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံ ၁၀၀၀ ကျော်သည့်အခါတိုင်းသတိရပါ။ အသစ်တစ်ခုကို directory သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖန်တီးထားသည်, ဒါကြောင့်ငါတို့ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch နှင့်အတူရိုက်ယူခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများအားလုံးကိုငါတို့သေချာအောင်ထုတ်ယူရန်ဖိုင်တွဲများအားလုံးကိုစစ်ဆေးရမည်။
လမ်းညွှန်များကိုလှန်လှောကြည့်ပါ messaging application များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောပုံများကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသောပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသိမ်းဆည်းထားသောနေရာတူညီသောလမ်းညွှန်တွင်မရှိသောပုံများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မဆုံးရှုံးလိုပါကထုတ်ယူခြင်းတွင်ထည့်သွင်းရန်အဆင်ပြေသည်။
၎င်းသည် macOS ရှိ Capture Image application မှပေးသော option နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဒီ function မီနူးများမှတဆင့်မရနိုင်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့ Windows 10 ရောက်ကတည်းက၊ အဲဒါကိုကြည့်ဖို့ငါတို့ကိရိယာဖန်တီးထားတဲ့ယူနစ်ကိုသွားပြီး mouse ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Import ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရွေးပါ။
ထိုအခါကစတင်ပါလိမ့်မယ် ငါတို့သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုဖတ်ပါ စက်ပေါ်တွင်၎င်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows PC သို့ကူးယူနိုင်သည်။
နောက်တစ်ဆင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းလိုသည့်လမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးသည်ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော် Next ကိုမနှိပ်မှီကျွန်ုပ်တို့သည်သွားပါသည် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ
ဤမီနူးအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံတွင်ဓါတ်ပုံများကိုသိမ်းဆည်းလိုသည့်ပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အပြင်, ငါတို့နိုင်ပါတယ် တင်သွင်းပြီးနောက်ကိရိယာမှဖိုင်များ Delete box ကို check လုပ်ပါ သွင်းကုန်ပြီးသွားရင်ဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch မှဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
Mac ၌ရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system ၏မူလနည်းလမ်းများကိုအသုံးမပြုလိုပါက၊ ဥပမာအားဖြင့်ဤကိစ္စတွင်ဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးချနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာ၏ပုံရိပ်များကိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ iPhone ကို PC နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်၊ ညာဘက်ကော်လံအတွက်ကင်မရာကိုရွေးပါ ရရှိနိုင်သောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားလုံးကိုပြသရန်။ ပြီးရင်ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Export ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူတို့သိမ်းချင်တဲ့ Directory ကိုသွားတယ်။
၄ င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်သိမ်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုလျှောက်လွှာမှတိုက်ရိုက်၊ ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ Delete ဟုခေါ်သောရွေးစရာမှတဆင့်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ iMazing ကိုယူရို ၃၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
La iFunbox အခမဲ့လျှောက်ထားခြင်းသည်အခပေးအပလီကေးရှင်းများကိုမသုံးလိုလျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းကိရိယာ၏ပါဝင်မှုကို Windows PC သို့ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ခြင်း၊ ၎င်းသည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်လည်ပတ်မှုစနစ်သာမက Mac နှင့်သာမကသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကူးယူရန်။ , iMazing လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားမှာပါ။ ကတည်းကကွဲပြားခြားနားသောပေမယ့်ကတည်းကဖြစ်စဉ်ကိုလက်တွေ့အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် application ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install ပါပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိရိယာကိုချိတ်ဆက်တယ်.
ဓာတ်ပုံ / ဓာတ်ပုံကိုနှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad နှင့် iPod touch ပေါ်တွင်ရှိသောပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုများပြသရန်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ပုံတွေရွေး ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်၌တင်ပို့ခြင်း / ကူးခြင်းသို့ PC ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PC သို့ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာမှဓါတ်ပုံများအားလုံးကိုဖျက်ရန် Delete / Delete ခလုတ်ကိုသာနှိပ်ပါ။
iPhone မှ Cloud သို့ဓါတ်ပုံများမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
ဖြစ်ရပ်အများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်အားလုံးကိုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် Mac သို့ကူးပြောင်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့ကိုပြင်ပ hard drive တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းရန်အသုံးပြုသူများအားလုံးကကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် Mac အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလည်းရှိသည်။ သင်၏ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမိုးတိမ်တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်ဖိုင်များအသုံးပြုသော Cloud သို့သွားရန်နှင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ဤဝန်ဆောင်မှုအတွက်အခမဲ့ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုဂူဂယ်လ်ဓာတ်ပုံများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား 12 mpx ထက်နည်းသော resolution နှင့် Full HD resolution ပါသောဗွီဒီယိုများအတွက်အကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းရန်နေရာပေးသည်။ အဲဒီမှာကျော်လွန်သမျှအရာအားလုံးကျနော်တို့ကသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သိမ်းပိုက်အာကာသကျနော်တို့ကန်ထရိုက်များထဲမှလျှော့ပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့် app တစ်ခုနှင့်အတူကြောင့်ထူးဆန်းပုံရသည်ပေမဲ့ ငါတို့အကြိုက်ဆုံးပုံရိပ်တွေကိုလက်မှာကိုင်လို့ရတယ်၊ ငါတို့စက်ပစ္စည်းမှာနေရာလွတ်တွေရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ် ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့ iPhone နှင့်အတူသိမ်းဆည်းထားသောဗွီဒီယိုများနှင့်ပုံရိပ်များကိုတိမ်တိုက်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေရာမလုံလောက်ပါကလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Google Cloud တွင်သိမ်းဆည်းထားသောပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
သင် Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်တိုင်း (၄ င်းကိုမထောက်ခံသော်လည်း 4G ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း) ကိုသတိရပါ။ Google Photos သည်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုအားလုံးကိုကူးယူသည် ငါတို့မိုthe်းတိမ်ကိုလုပ်ပြီးသူတို့မှာအဲဒါမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကိရိယာကိုဖျက်ပစ်တာကလုံးဝလုံခြုံတယ်။
နှစ်ပေါင်းစုံတွဲများအတွက်, Cupertino ယောက်ျားလေးများမှစတင်ခဲ့သည် သိုလှောင်မှုအစီအစဉ်အသစ်များ၊ တီဘီ ၂ ခုအထိတက်နိုင်သောအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းပါ အရာရာတိုင်းကိုလက်တွေ့ကျကျသိမ်းဆည်းနိုင်တယ်၊ အဲဒါကပုံမှန်အားဖြင့်သိုမဟုတ်သိုလှောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူး၊ အထူးသဖြင့်သူ့မှာထူးခြားချက်တွေရှိနေသေးတယ်။
အမေဇုံပရီမီယံဖောက်သည်အားလုံးသည်သူတို့ရရှိနိုင်ပါသည် အမေဇုံမိုcloud်းတိမ်၌အကန့်အသတ်သိုလှောင်မှုအစီအစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပုံရိပ်များကိုဗီဒီယိုများစွာသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကမူရင်းပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အခြားသေးငယ်သောပုံနှိပ်စရာမလိုဘဲသိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤ ၀ န်ဆောင်မှု၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက၊ ဤရွေးချယ်မှုသည်သင်၏နေရာလိုအပ်ချက်အတွက်အချိန်အတော်အသင့်ဖြစ်စေ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်စေအကြံဥာဏ်အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iPhone ကို » သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ် » ဓါတ်ပုံများကို iPhone မှကွန်ပျူတာသို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
iPhone ဓာတ်ပုံများကိုစီမံရန်အလွန်အသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့သည် - CopyTrans Photo!
iOS 14 သည်အပြောင်းအလဲများကို home screen သို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်
iOS 14 ရှိ HomeKit သည်မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုးတက်စေပြီး Night Shift ကိုထည့်သွင်းပြီး HomePod ၏အသံကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်